Nyocha akwụkwọ akụkọ
Nyocha na nkatọ akwụkwọ akụkọ
Oriakụ March, nke Cristina Feito dere
Mgbe atụnyere onye edemede ọhụrụ dị ka Cristina Feito na Patricia Highsmith, ọrụ kwụkwasịrị dị ka mma agha nke Damocles na-eche nkatọ izugbe nke ndị na-agụ akwụkwọ ka ha kwụsị ikpe ikpe ahụ. Na-akwado ntụnyere ziri ezi, ka echiche a na-arụtụ aka ka ọrụ a na-agbasa, were…
Ọchịchọ maka Nwanyị Amphibian, nke Cristina Sánchez Andrare dere
Dị ka Sabina ga-ekwu, "ọ dịghị ihe na-akpali agụụ mmekọahụ dị njọ karịa agụụ maka ihe ọ bụla na-emetụbeghị." N'okpuru ákwà mgbochi nke eziokwu, akụkọ ifo na-eme ka ụdị akụkọ na-adịghị mma nke na-ebuli eziokwu ahụ elu ma ọ bụ na-eme ka ọ dị ụkọ. Na njedebe bụ compendium n'akụkụ abụọ nke eziokwu. Akwụkwọ akụkọ Christina...
Anyị na-amalite na njedebe, site Chris Whitaker
Mgbe ụfọdụ ụdị ojii na-enweta ihe ọ pụtara na-adabere na ịdị adị. Okwu ikpe dị ka nke Víctor del Arbol, nke nwere ike ime omimi miri emi site na introspection nke ihe odide ya. Ihe yiri nke a na-eme onye ode akwụkwọ a, Chris Whitacker onye ji isi ihe ọzọ nke njikọ na-enweghị mgbagha bịarutere…
Mụ na Mr. Wilder site n'aka Jonathan Coe
N'ịchọ akụkọ na-ekwu banyere eluigwe na ala ahụ nke na-emepe emepe mmekọrịta mmadụ na ibe ya, Jonathan Coe, n'akụkụ nke ya, na-ekwu maka ịdị mma nke nkọwa kachasị mkpa. N'ezie, Coe enweghị ike ịhapụ ịdị oke ọnụ ahịa ahụ zuru oke nke o ji nkọwa zuru oke kọwaa. Site na…
Barbazul Castle, nke Javier Cercas dere
Onye dike a na-atụghị anya ya nke ụdị onye nyocha nke na-ele anya na enyo Vázquez Montalbán. N'ihi na Melchor Marín bụ ịlọ ụwa, yana ụdị oge ohere ya dị iche iche, nke Pepe Carvalho bụ onye duru anyị n'ọfịs ndị na-adịghị mma ma ọ bụ n'etiti abalị kachasị njọ na Barcelona. Javier Cercas gbatịrị ...
Ihe nketa nke Maude Donegal. Ọkpara ahụ dị ndụ: Akwụkwọ akụkọ omimi abụọ, nke Joyce Carol Oates dere
Enwere ndị odee gafere ụdị nke ewepụtara ha na akwụkwọ akụkọ ọhụrụ ha nke ọ bụla. Nke a bụ ikpe nke Oates na ọ na-eme na mkpọ mmụọ ọjọọ a mana nke ahụ na-eche ụzọ zuru oke maka oke ọnwụ, na mbọ nke nkwurịta okwu ime mmụọ na ndị ...
Akwụkwọ ọkọwa okwu dị egwu nke Black Novel, nke Pierre Lemaitre dere
Ụdị noir bụ taa bụ otu n'ime ntọala kachasị ike nke akwụkwọ ọgbara ọhụrụ. Akụkọ gbasara mpụ ma ọ bụ nke ụwa, ịbịakwute ụlọ ọrụ gbara ọchịchịrị na-achịkwa ọwa mmiri a ma ama, ndị uwe ojii ma ọ bụ ndị nyocha na-ahapụ akpụkpọ ha iji dozie okwu kacha enye nsogbu. Na Pierre Lemaitre bụ otu n'ime ndị ...
Peeji1 Peeji2 ... Peeji131 Ọzọ →